I-20 yezeMisebenzi yoNyango ePhambili ngokuFunda iSikolo esincinci ngo-2022
I-20 yezeMisebenzi yezoNyango ehlawula ephezulu kunye nokufunda okuncinci
Le posti yebhlog ibonelela ngolwazi ngemisebenzi yezonyango ehlawula kakhulu ngemfundo encinci, Oko kukuthi, awunyanzelekanga ukuba uhambe ngobunzima bengqesho yesikolo ukufumana le misebenzi. Ngemfundo encinci, ngokucacileyo enxulumene nonyango, unokufumana imisebenzi yezonyango.
Kungoku nje abantu abaninzi bafuna ukuya kwisikolo semed kwaye babe ngugqirha onelayisensi yobuchwephesha, ayinguye wonke umntu onokuthi angene kwisikolo semed ngenxa yezizathu ezahlukeneyo. Isenokuba kukhuphiswano okanye iindleko eziphezulu, njengoko usenokwazi, iinkqubo zonyango zezona khosi zibiza kakhulu zokufunda.
Nangona kunjalo, ukuba awukwazi ukungena kwisikolo sem med ukuze uzalisekise amaphupha akho okuba ngugqirha oqeqeshiweyo kunokubakho enye indlela. Ewe, okokuqala, ukuba awukwazi ukungena kwisikolo se-med uzigcinele uxinzelelo oluza nayo kunye nenkcitho.
Ewe masingatsho ukuba amaphupha akho achithwe ngokupheleleyo, ukuba ibiyiyo kanye ngebengazange ndizikhathaze ngokubhala kunye nokupapasha eli nqaku, kwaye usengakwazi ukuqhubeka kwinkalo yezonyango. Kukho iindlela ezimbalwa ezingekho ngqongqo kwaye ezingabizi kakhulu zokungena kwicandelo lezonyango kwaye ziyaxoxwa kweli nqaku.
Ungaya kuluntu okanye kwikholeji yobugcisa ukuze ulandele isatifikethi, idiploma, okanye isidanga sokudibana kwezinye iinkqubo zonyango ezinje ngokufaka iikhowudi kwezonyango kunye nokuhlawulisa, umncedisi kwezonyango, njl.njl.
Yabona? Abathathi xesha lokuyigqiba, nayo, ayinzima, ayabizi, kwaye bahlawula ixabiso elifanelekileyo lomvuzo ngonyaka. Kuya kufuneka ube kwicandelo lezonyango, 'yabona, usahambelana nento oyithandayo, kwaye amava owafumanayo anokusebenza njengesixhobo sokukungenisa kwisikolo semed kwaye ekugqibeleni ube ngugqirha onelayisensi njengoko ubusoloko ufuna.
Ngapha koko, ukuba oku akunanto yakwenza nawe ofuna ukungena kwicandelo lezonyango kwaye ufuna nje umsebenzi okhawulezileyo oya kwamkela kunye nesikolo esincinci, ke qhubeka ufunda, unokufumana le bhlog iluncedo. Kodwa emva koko, imisebenzi apha inxulumene nezonyango kodwa ungakhawuleza ufunde konke okukuyo, qalisa ukusebenza, kwaye uqalise ukufumana umvuzo ophucukileyo kwisithuba sonyaka omnye okanye nangaphantsi.
Enye into kukuba, imisebenzi yezonyango iphakathi kwemisebenzi ehlawula kakhulu naphina kwaye inyani yokuba awuzukufuna isidanga se-bachelor kule misebenzi ibenza babenomdla ngakumbi wokufuna ukungena. Intsimi yokhathalelo lwempilo iyaqhubeka ikhula kwaye ukuba unazo naziphi na izakhono ezinxulumene noko, ngokuzenzekelayo ufuna kakhulu.
Ke, olu luhlu luqulathiweyo kunye neenkcukacha zemisebenzi yezonyango ehlawula kakhulu ngemfundo encinci ekufuneka ufumene izakhono kuyo, ufumane isatifikethi sakho, kwaye uqeshwe kushishino lokhathalelo lwempilo.
1 Imisebenzi ephezulu yezoNyango ehlawulwa ngokuFunda okuncinci
1.1 1. UMncedisi wezeMpilo
1.2 2. Unobhala Wezonyango
1.3 3. Unyango lwe radiation
1.4 4. UMncedisi wamazinyo
1.5 5. Ingcali yeeKhemesti
1.6 6. Ugqirha wezeNzululwazi yeNyukliya
1.7 7. Ingcali yePhlebotomy
1.8 8. Abakhutsheli bezoNyango
1.9 9. Uxilongo lokuphononongwa kweNyanga
1.10 10. Ingcali yezoNyango engxamisekileyo (EMT)
1.11 11. UMncedisi wePhysical Therapist
1.12 12. Ukulungiswa kwezixhobo zoNyango
1.13 13. Ingcali yeLebhu yeLabhoratri
1.14 14. Ugqirha weTekhnoloji
1.15 15. Umongikazi obhalisiweyo
1.16 16. Ingcali yokufaka iikhowudi kwezonyango
1.17 17. UMlawuli wezeMpilo
1.18 18. Ukuncedwa kwempilo yasekhaya
1.19 19. Ingcali ngezeMpilo
1.20 20. Isondlo
Imisebenzi ephezulu yezoNyango ehlawulwa ngokuFunda okuncinci
Uluhlu oluchazwe ngezantsi luyeyona misebenzi yezonyango ihlawulwa kakhulu ngemfundo encinci kunye nomvuzo ophakathi:
Unyango lwe radiation
Ugqirha wezeNzululwazi yeNyukliya
Unyango lwe-Sonication yoNyango
Ugqirha oNgxamisekileyo wezoNyango (i-EMT)
Ukulungiswa kwezixhobo zoNyango
Ingcali yeLebhu yeLabhoratri
Ingcali yokufaka iikhowudi kwezonyango
Iingcali zoLwazi lwezeMpilo
1. UMncedisi wezeMpilo
Uncedo lwezonyango yenye yezona zinto zibhatalwa kakhulu kwimisebenzi yezonyango enemfundo encinci kwaye kulula njengoko kubhengezwa, umsebenzi wakho kukunceda nje ugqirha esibhedlele okanye eklinikhi. Bahlala bengabantu bokuqala abadibana nabo xa befika esibhedlele.
Imisebenzi yomncedisi kwezonyango ibandakanya ukujonga iimpawu ezibalulekileyo zesigulana, ukuthatha kunye nokugcina iirekhodi zembali yezonyango, ukucacisa iinkqubo zonyango kwizigulana, ukuyalela abaguli malunga namayeza kunye nokutya, ukuqokelela nokulungiselela iimvavanyo zelebhu, njl.
Ungakhaba ukuqala kulo msebenzi ngokufumana isatifikethi okanye isidanga sokudibana kwikholeji yoluntu kwaye kutshanje ndipapashe iposti yebhlog ukuba ngumncedisi kwezonyango njani. Umvuzo ophakathi umncedisi wezonyango yi- $ 36,542 ngonyaka.
Unomdla wokuthatha le nkqubo kwi-Intanethi? Cofa apha
2. Unobhala Wezonyango
Ngomndilili womvuzo wonyaka wama- $ 32,653, Unobhala Wezonyango yenye yezona zinto zihlawulwa kakhulu kwezonyango ngemfundo encinci. Umsebenzi apha uphantse ufane nalowo uncedisayo kwezonyango kodwa ngeli xesha uza kube ulawula iindima zolawulo kodwa usenolwazi oluncinci lweklinikhi.
Imisebenzi ebandakanyekayo kulo msebenzi kukwenza amadinga, ukuphendula iminxeba, ukugcinwa kweencwadi, ukulungiselela iingxelo zonyango kunye ne-invoice, ukubhala imiyalezo, kunye nokulungiswa kwamaphepha kunye nephepha leinshurensi. Ungazifumana ezi zakhono xa usiya kwinqanaba lokudibana okanye isatifikethi.
3. Ingcali ngemitha
Lo msebenzi uhambele phambili kakhulu kunesibini sokuqala kwaye uza nomvuzo ophakathi we- $ 80,570 ngonyaka uwenza kuluhlu lwemisebenzi yezonyango ehlawula kakhulu ngaphandle kwesikolo esincinci. Imitha isetyenziselwa i-x-reyi kunyango lwezifo ezithile ezinje ngomhlaza oya kuthi ulawule kwizigulana.
Unokufumana izakhono eziyimfuneko ngokuya kwikholeji yasekuhlaleni kwaye unokufuna ukufumana isidanga sokudibana nale.
4. UMncedisi wamazinyo
Ngokungafaniyo nomncedisi wezonyango obonakala ngathi luhlobo oluqhelekileyo, uncedo lwamazinyo luthe ngqo kwaye uya kusebenza phantsi kolawulo logqirha wamazinyo onelayisensi. Uya kuba noxanduva lokudibanisa imisebenzi yamazinyo kunye neyolawulo kubandakanya nokulungisa kunye nokugcina izixhobo zogqirha wamazinyo, ukuhlela iirekhodi zezigulana, ukumisela ixesha lokuqeshwa, njalo njalo.
Ungumsebenzi ofanayo nanjengomncedisi kwezonyango kodwa kule meko, uya kuqeqeshwa kwaye uxhotyiswe ngezakhono ezinxulumene nendawo yamayeza kunye nendlela yokubanceda oogqirha bamazinyo. Ukuba ngumncedisi wamazinyo yenye yezona zinto zihlawulwa kakhulu kwezonyango ngemfundo encinci, unokufumana isatifikethi okanye isidanga esidibeneyo.
Umvuzo ophakathi wonyaka yi- $ 36,542
5. Ingcali yeeKhemesti
Ikhemesti lelinye isebe lamayeza kwaye oosokhemesti bafuna abancedisi ukwenza imisebenzi yabo yemihla ngemihla ibe lula. Ungaqala ikhondo lomsebenzi apha ngokuya kwikholeji enikezela ngenkqubo, ufumane izakhono, uqinisekiswe, kwaye uqale ukusebenza njengengcali ekhemesti.
Umvuzo wabo umyinge we-34,000 yeedola minyaka le eyenza ukuba ibe yenye yezona zinto zihlawulwa kakhulu kwezonyango ngemfundo encinci. Imisebenzi ebandakanyekileyo ekubeni yingcali yekhemesti kukujongana nemigqaliselo kunye nokugcwaliswa kwezicelo zesigulana, ukugcina imfihlo yesigulana, ukubonelela ngenkonzo yabathengi, ukucacisa imigqaliselo kwizigulana, kunye nokulungiswa kwetyala kunye neinshurensi.
6. Ingcali yezoNyango yeNyukliya
Uyavumelana nam ukuba lo msebenzi ungaphezulu komda kwaye kufuneka ube nomvuzo ophezulu kakhulu xa kuthelekiswa neminye. Ewe, luhlobo oluphezulu. Ku- $ 75,660 umyinge womvuzo wonyaka yenye yezona zinto zihlawulwa kakhulu kwezonyango ngemfundo encinci kwaye isidanga sokudibana siyakukubonelela ngezakhono eziyimfuneko ezifunekayo ukuze wenze lo msebenzi.
Imisebenzi ibandakanya ukulungiswa kwamayeza e-radioactive kunye nokuwanika kwizigulana, ukuthatha iimvavanyo, kunye nokuchaza ukhathalelo lobuqu kwizigulana.
7. Ingcali yePhlebotomy
I-Phlebotomy Technologist yenye yezona zinto zihlawulwa kakhulu kwezonyango ngemfundo encinci, ungaqala umsebenzi ebaleni ngoqeqesho emsebenzini okanye isatifikethi kodwa ukuba ufuna ulwazi olubanzi kuya kufuneka ukhethe isidanga sokudibana. Umvuzo ophakathi uyi- $ 37,356 ngonyaka.
Imisebenzi ibandakanya ukuzoba igazi lezigulana kuvavanyo lweelebhu, iminikelo yegazi, kunye nokufakwa ngaphakathi. Ngobu buchule, unokusebenza kwiibhanki zegazi, amaziko oxilongo, kunye nolunye useto lokhathalelo lwempilo.
8. Abakhutsheli bezoNyango
Isikolo esincinci kakhulu siyafuneka kwesi sikhundla somsebenzi kwaye umvuzo uphezulu, i-avareji ye- $ 36,000 ngonyaka. Umsebenzi ulula kwaye ucacile kodwa usafuna ukufunda indlela yokwenza ngokufanelekileyo kunye nokuya kwikholeji yoluntu ukulandela inkqubo kubonakala ngathi lolona khetho lufanelekileyo.
Uxanduva lokukhutshelwa kwezonyango lubandakanya ukusebenzisa iinkqubo ze-elektroniki ukugcina umkhondo weengxelo zonyango, ukumamela ngononophelo ukurekhodwa kwelizwi koogqirha, abongikazi, nabanye abasebenza kwicandelo lokhathalelo lwempilo kwaye babhale oko kuthethwayo, ukuguqulela izifinyezo zonyango, kunye nokuhlela Uyilo olunikezwe sisoftware yokwazisa intetho.
9. Unyango woNyango woNyango
Ngomvuzo ophakathi we-62,000 yeedola, iDiagnostic Medical Sonographer yenye yezona zinto zihlawulwa kakhulu kwezonyango ngemfundo encinci.
Ugqirha woochwephesha kunyango owenza uvavanyo lokucinga ngomonde kwizigulana ezibonisa okwenzekayo kweli candelo lomzimba kwiscreen. Olunye uxanduva lubandakanya ukuthatha imbali yonyango yesigulana ngaphambi kokusivavanya nokuphendula nayiphi na imibuzo abanokuba nayo.
10. Ingcali yezoNyango engxamisekileyo (EMT)
Aba ngabafana abaphendula ngokungxamisekileyo kwezonyango ezinje ngeefowuni ezingama-911 kwaye banikezela ngoncedo olukhawulezileyo kunyango kwizigulana. Nawe unokuba njengabo ngesatifikethi okanye isidanga sokudibanisa ukuphucula ulwazi lwakho ngokubanzi.
Ngomvuzo ophakathi we-39,656 yeedola ngonyaka, i-EMT yenye yezona zinto zihlawulwa kakhulu kwezonyango ngemfundo encinci.
11. UMncedisi wePhysical Therapist
Umvuzo ophakathi wonyaka womncedisi wezonyango ngu- $ 52,000, yenye yezona zinto zihlawulwa kakhulu kwezonyango ngemfundo encinci kwaye unokufuna ukufumana isidanga seminyaka emibini esinokuqeshelwa esi sikhundla somsebenzi.
Njengomncedisi womzimba, umsebenzi wakho kukunceda abaguli bafikelele kwiinjongo zabo zomzimba emva koxinzelelo lomzimba olufana nengozi okanye ukwenzakala komzimba. Ukusebenza phantsi kwesikhokelo sempilo yomzimba, uya kuba unceda abaguli ukuba bachache kwisifo ekuhambeni kwexesha ngesicwangciso esithile sokukhula kwaye zininzi izinto ezizodwa kunye nezigulana.
Ezinye iimbopheleleko ziquka:
Ncedisa kwimithambo enzima
Ukugcina irekhodi lenkqubela phambili yesigulana
Ukucoca jikelele kunye nokugcina
Ukujonga imeko yezigulana kunye nenkqubela phambili yokuhamba kwexesha
12. Ukulungiswa kwezixhobo zoNyango
Izixhobo ezisetyenziswa kwicandelo lezonyango zihlala ziphuhlisa imiba kwaye kufuneka zilungiswe kwaye zigcinwe, ngoku, kukho abantu abathile abaqeqeshiweyo kwaye baxhotyiswe ngezakhono zokulungisa izixhobo zonyango, aba bantu balungisa izixhobo zonyango.
Ukuthatha lo msebenzi, uyakube ulungisa izinto ukusukela ekuhambeni okulula ukuya koomatshini abanzima njengoomatshini beMRI. Lo ngomnye wemisebenzi yezonyango ehlawulwa kakhulu ngokufunda kancinci kwi- $ 58,820 kwaye ungafumana izakhono ngokuthatha isatifikethi okanye isidanga esidibeneyo.
13. Ingcali yeLebhu yeLabhoratri
Ingcali yezonyango okanye yelebhu yenye yezona zinto zihlawulwa kakhulu kwimisebenzi yezonyango ngemfundo encinci, umsebenzi ubandakanya ukwenza uvavanyo kunye nokuhlalutya iisampulu ezinjengamanzi omzimba, izicwili kunye nezinye iisampulu. Ngobuchule bakho, onokuthi ubufumane ngesatifikethi okanye isidanga sokudibana, ungasebenza kumaziko oxilongo, kwizibhedlele, nakwiilebhu zonyango.
Umvuzo ophakathi uyi- $ 44,574 ngonyaka.
14. Ugqirha weTekhnoloji
Itekhnoloji yotyando iba namava obunjani botyando lokwenyani olubonakala ngaphandle kokuya kwiminyaka elishumi yoqeqesho rhoqo. Umsebenzi wakho kubandakanya ukucoca kunye nokulungiselela igumbi lotyando, ukubulala iintsholongwane kunye nokulungiselela izixhobo, ukugcina impahla kunye noku-odola izinto zonyango, kunye nokunceda abagqirha ngexesha lotyando.
Ukuze uqale ikhondo lobuchwephesha ngotyando, kuya kufuneka ufumane isidanga sokudibana okanye isidanga sokuqala. Umvuzo ophakathi uyi- $ 56,310 ngonyaka.
15. Umongikazi obhalisiweyo
Abongikazi yinxalenye enkulu yamaziko onke ezonyango kwaye basebenza ngokusondeleyo nogqirha osebenzayo. Ukuze ube ngumongikazi obhalisiweyo kufuneka ube nelayisensi ekhethekileyo kurhulumente, idiploma yamabanga aphakamileyo, kunye nediploma yemfundo yamabanga aphakamileyo kunesidanga sokuqala.
Njengomongikazi obhalisiweyo, uya kujongana nokujonga iimpawu ezibalulekileyo zesigulana, ukufaka kunye nokuqala unyango lwe-intravenous, ukucoca amanxeba kunye nokutshintsha amabhandeji, kunye nokugcina oogqirha besazi ngemeko yesigulana.
Umvuzo ophakathi wonyaka yi- $ 55,030
16. Ingcali yokufaka iikhowudi kwezonyango
Iingcali zokufaka iikhowudi kwezonyango ngabantu abasebenza kwisebe lokuhlawulisa amaziko okhathalelo lwempilo anje ngeeklinikhi, izibhedlele, amakhaya abalupheleyo, amaziko okuhlaziya, kunye nabanye. Ungakhaba ukuqala umsebenzi kweli candelo ngokugqibezela inkqubo yoqeqesho kunye nokufumana isatifikethi okanye isidanga sokudibana.
Uxanduva lubandakanya ukuhlelwa nokubhalwa koxilongo, unyango, kunye neenkqubo zokuhlawula kunye nokubuyisela imali kwiinkampani zeinshurensi yezempilo.
Umndilili womvuzo wonyaka yi- $ 45,947 ngonyaka
17. UMlawuli wezeMpilo
Umlawuli wokhathalelo lwempilo yenye yezona zinto zihlawulwa kakhulu kwezonyango ngemfundo encinci, ehlawula abantu ebaleni umvuzo ophakathi wama- $ 66,000 ngonyaka. Ukusebenza kwesi sikhundla somsebenzi akuyi kwenza ukuba unxibelelane kakhulu nezigulana, endaweni yoko, uya kuba uphatha ezemali kwaye ulawula abasebenzi beziko lonyango.
Uya kuba noxanduva lokugcina iirekhodi zonyango kunye nezolawulo, ukongamela abasebenzi, ukulandela imithetho kunye nemigaqo yokhathalelo lwempilo kuwo onke amasebe, kunye nokwenza iishedyuli zomsebenzi zabasebenzi.
18. Ukuncedwa kwempilo yasekhaya
Ukuba awuyithandi imbono yokusebenza esibhedlele kwaye usafuna ukubandakanyeka kushishino lokhathalelo lwempilo ungakujonga njengokusebenza njengomncedisi wezempilo ekhaya. Ngomnye wemisebenzi yezonyango ehlawula kakhulu ngemfundo encinci, apho unokwenza umvuzo ophakathi we- $ 32,000 ngonyaka.
Njengoncedo lwempilo yasekhaya, uya kusebenza nezigulana esele zikhulile, abakhubazekileyo, kwaye unceda abaguli abaneengxaki zesondlo kunye nokhathalelo lomntu. Ngokubanzi, ungumncedisi okhathalelayo ekhaya kwaye wenza ubomi bube lula ebantwini.
19. Ingcali ngezeMpilo
Ingcali yolwazi ngezempilo yenye yemisebenzi yezonyango ehlawula kakhulu ngemfundo encinci kwaye imisebenzi ephambili ibandakanya ukulawula nokulungiselela ukhathalelo lwempilo kunye nedatha yezonyango ngokuqinisekisa ukuchaneka, ukufikeleleka, umgangatho kunye nokhuseleko lolwazi lwezonyango kwiinkqubo zedijithali kunye nokuprintwa.
Ungangena kule ntsimi ngesidanga esidibeneyo kwaye usebenze kwiiklinikhi, ezibhedlele nakwezinye izibonelelo zononophelo lwempilo. Umvuzo ophakathi uyi- $ 47,861 ngonyaka.
Ukuba yingcali yesondlo unokufumana umvuzo ophakathi we- $ 53,039 ngonyaka kwaye ungangena ebaleni ngesidanga esidibeneyo. Njengengcali yesondlo, uya kunceda abaguli bacwangcise kwaye babandakanye iindlela zokutya ezisempilweni ukuxhasa impilo kunye nokuba sempilweni.
Uya kunceda abaguli abanesifo seswekile kunye nabantu abanokungalungelelani kokutya ukucwangcisa ukutya abakutyayo.
Le yeyona misebenzi yezonyango ihlawulwa kakhulu ngemfundo encinci onokuthi ufune ukuyithatha, bayakhawuleza ukuyigqiba, ngexabiso eliphantsi, kwaye beza nomvuzo olungileyo wakuba uqinisekisiwe. Faka isicelo kwiikholeji zoluntu ngayo nayiphi na kwezi nkqubo njengoko zibonelela ngakumbi.
Ezona zikolo ziBalaseleyo kwezonyango ePennsylvania
Ubungcali boBugqirha baBafundi abaNtsundu baFunda kwelinye ilizwe
Izikolo zeZonyango ze-24 ezilula ukungena e-UK, e-US, eCanada, e-Australia, nakwabanye
Ukufunda kwelinye ilizwe kunye neScholarship
imisebenzi yezonyango ehlawula kakhulu ngemfundo encinci
Okulandelayo Post:Amanyathelo ama-5 okufumana i-Ordained kwi-Intanethi ukuba yenze iMitshato